COLEUS: XULASHADA NOOCYADA UGU CAANSAN EE DHUL FURAN (SHARAXAAD IYO SAWIR) - COLEUS
Ugu Weyn Ee Coleus
Tilmaanta caleenta Coleus ee lagu beerayo dhul furan
Coleus waa cawska iyo caleemaha subshrub, oo ay maamusho bannaanka si ay u muuqdaan muuqaalkooda. Farshaxanka midabka caleenta, midabada iyo qaababka, iyo sidoo kale qaabkoodu aan caadi ahayn, wuxuu Coleus ka dhigi karaa mid fudud oo naqshadeynta muuqaalka ah.
Coleus Dragon Dragon, waxaa laga yaabaa in ay ugu muuqdaan kala duwanaansho kala duwan. Caleemo muuqata, oo leh ilko cadaan ah oo ku yaala geesaha, oo ku rogrogaya wejiga-casaan, oo kudhow geeska leh midab madow-guduud ah.
Caleemaha kala duwan ee noocyadaasi waa dherer dhexdhexaad ah, oo la mariyay iyo dib u buuxiyay ilkaha fiiqan ee geesaha. Marka ubax, masduula madow wuxuu leeyahay inflorescence qaabka baalalka, iyo sidoo kale ubax buluug ah.
Inkasta oo xaqiiqda ah in Coleus yahay geedka kulaylaha, uma baahna xaaladaha aqalka dhirta. Waxaa lagu ridi karaa guriga iyo beerta. Waxay u dulqaadataa heerkulka ilaa + 16 ° C. Kala duwanaantani waxay ku koraan 80 cm, sidaas awgeed waxaa loo isticmaali karaa inay noqoto mid ka mid ah bandhigyada dhexe ee nidaamka ubax.
Coleus ee Taxanaha Wizard waxaa lagu kala soocay midabyo dhalaalaya oo caleemo leh, oo leh cagaar iyo cagaar cagaaran oo midabkeedu hooseeyo. Buuldaan caan ah wuxuu koraa illaa 35 cm, laakiin waxaa lagula talinayaa in lagu beero goobaha meelaha laga ilaaliyo qoraalada, iftiinka buuxa ama hooska qayb ahaan.Wixii coleus coral, khafiif ah, miiray, carrada non-acidic waa mid aad u fiican. Wuxuu jecel yahay waraabinta joogtada ah iyo buufinta, hal mar asbuucii bacarimiso Bacriminta macdanta. Tan iyo kala duwanaanta noocaan oo kale waxay u egtahay labadaba maadooyinka isku dhafan iyo kelidood, waa marti soo dhaweyn leh sariirta ubaxa.
Ma taqaanaa? Maaddooyinka waxtarka leh ee ka sameysan Coleus waxay gacan ka geystaan ​​burburinta unugyada baruurta. Racfaannada Tibetan ayaa diyaarinaya ururinta geedo, kuwaas oo ay ku jiraan Coleus, iyo decoction ay ku daaweeyaan cudurada sanbabada.
Coleus nooca qalooca Coleus si dhakhso ah iyo cufan u baxda leh caleemo waaweyn oo ah midab kala duwan. Waxay ku koraan ilaa 80 cm, baadiyaha iswada leh ee iswada leh, oo leh dhexroor taajir ah ilaa 55 cm. Waraabinta waxaa loo baahan yahay quudin dhexdhexaad ah sida loo baahdo. Coleus Mix Empire waa la duqeeyey, laakiin waxa lagu gartaa koritaan aad u degdeg ah. Waxay u egtahay mid aad u wanaagsan oo isku dhaf ah ubaxyo kale iyo geedo qurxoon.
Waa muhiim! Iyadoo aan loo eegin noocyada kala duwan, isla daryeelka waa in la abaabulo ka dib caleenta sida dhirta kale: si joogto ah uga saari haramaha, ka ilaali duurka (waxay sii kori doonaan si wayn).
Midabyo fara badan oo caleemo leh oo qorrax leh. Macdanta caleenta caleemaha waxay dareemeysaa mid aad u wanaagsan oo qoyan, mana qalloocin qorraxda. Waxyaabaha kala duwan ee kala duwan ee blooms this soo daahay, laakiin caleemaha yihiin shaqada ugu weyn ee madaxtooyada, sidaa darteed ubaxyadu badanaa jiidan. Warshadu waa sannad, sida coleuska ugu badan, laakiin xilliga qaboobaha waxa fiican in loo guuro guriga. Tani waa nooc ka mid ah noocyada colostasis loogu talagalay sariiraha ubaxa, jarida nidaamyada ubaxa, daaqadaha iyo kabaha hoostooda.
Waxaa si wanaagsan u kora on acidic dhexdhexaad ah, carradu qoyan, uma dulqaadan qoyaan xad-dhaaf ah.
A noocyo aad u caan ah coleus ah ee sii kordhaya beerta. Sababtoo ah qabsoomid la'aanta xaaladaha sii kordhaya, waxaa badanaa loo isticmaalaa naqshada muuqaalka. Warshadu waxay u dulqaadataa kuleylka, la'aanta iftiinka iyo qoyaanka, iyo si loo ilaaliyo qoyaanka ciidda agagaarka jirkaaga, waxaad isticmaali kartaa mulch. Sida caleenta kale oo badan, noocyada kala duwan ee noocyada kala jajabka.
Bushku wuxuu koraa 35 cm, iyo sababtoo ah caleemaha dhalaalaya, waxay qurux badan tahay beeritaanka kali ah, iyo isku dhafka dhirta kale.
A miro ku habboon qaabeeya kuleylka si fiican, laakiin hoos hoos buuxa caleemaha cufan wuxuu noqon karaa gebi ahaan cagaaran. Fikrad u leh beeritaanka dheriga, weelasha iyo ubaxyada, jidka Wizard Jade ayaa sidoo kale u muuqan doona qurux badan. Its height wuxuu gaadhay 35 cm, iyo dhexroorka taajkii - 30 cm.
Sariiraha ubaxa leh Coleus ee Taxanaha Wizard waxaa badanaa lagu daraa liibaska, gypsophilia, liatris iyo kermec.
Waa muhiim! Marka coleus waxaa faafin by abuur ama gooyn, markii ugu horeysay,ilaa ay sii xoogaystaan dalagyadawaa inuu ku hoos jiraa filimka.
Wizard dahab ah
Heerkulka caleenta dahabka ah wuxuu u dhexeeyaa 30 illaa 35 cm. Kala duwanaantan waxaa ka muuqda midab cagaaran iyo midab huruud ah oo caleemo ah, kaas oo qorraxda ka muuqda dahab. Geedkuna wuxuu jecel yahay meelo yaryar iyo waraabin dhexdhexaad ah, iyo inuu abuuro baadiyaha, qanjiradoodana sarajooga. Coleuskani waa midabka oo huruud ah, wuxuu u egyahay dheriga, weelka, oo lagu daro dhirta kale ee dhalaalaya oo yar, adigoo dejinaya qoraalka aasaasiga ah ee kudaha.
Coleus ee taxanaha Kong waa dhirta xoog leh laamo la soo saaray iyo caleemo, dhalaalaya dhalaalaya. Heerkuna aanu ka badneyn 35 cm, coleuska noocan oo kale ah wuxuu u dulqaadanayaa hooska, wuxuu u muuqdaa mid weyn oo laga sameeyo beerto, ubax, ubax, iyo ubax, sida qurxinta beerta oo keliya. Wuxuu u baahan yahay daryeel yar: si joogta ah laakiin ma ahan waraabin badan.
Xiiso leh On warshad qaxwaha ee jasiiradda Java, si ay u ilaaliyaan cirku ka soo weerarka digaagga, a hedge ee coleus waxaa lagu beeray dhinacyada beeraha.
Dhirta ornamental wuxuu koraa 60 cm, oo leh taaj diirran oo leh dhexroor illaa 50 cm. Geedkuna wuxuu jecel yahay goobo haray iyo waraabin dhexdhexaad ah. Kong Junior waxaa la goosanayaa goor dambe, taas oo ka dhigaysa mid soo jiidasho leh: wuxuu ilaaliyaa raadintiisa qurxinta muddo dheer. Dhererkiisu wuxuu u oggolaanayaa in dhirta loo isticmaalo sidii xuduudda, sheyga walxaha kala duwan iyo abuurid kali ah.
Mid kasta oo ka mid ah noocyada Coleus waxay u egtahay mid cajiib ah marka la sameynayo sariiraha ubaxa, balakoonnada, barkadaha xagaaga iyo sariiraha ubaxa. Geedka palette ee hodanka ah ee dhirtaas ayaa kuu ogolaanaya inaad sameysid sawirro midab leh oo qurux badanna ka sameysta qaabka ubaxa dhirta kale ee ubaxa.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Coleus 2019